News – FBV SPORT NEWS
နောက်နှစ်မှာ ယူနိက်တက်ကြုံနိုင်တဲ့ ကြောက်စရာအခြေအနေကို ရွိင်ကိန်းသတိပေးပြီ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီနှစ်နွေမှာ လူသစ်ခေါ်ရေးစီမံချက်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ပေးခဲ့တဲ့ ကတိကို တည်အောင် အမြန်အကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင့် မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရွိင်ကိန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေတုန်းကတည်းက ရွိင်ကိန်းဟာ ယူနိက်တက်အသင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ပြီး …
June 22, 2021 By admin Sports News
ပေါ့ဘာစာချုပ်ကိစ္စ အာဆင်နယ်ဆီက သင်ခန်းစာယူရမယ့် ယူနိုက်တက် လက်ရှိနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေမှာ ထိပ်တန်းရောက်နေတာကတော့ပေါ့ဘာဟာယူနိက်တက်မှာဆက်ရှိမှာလား မရှိဘူးလား? ယူနိက်တက်ဘက်က ပေါ့ဘာကို ထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာလား? လစာများစွာတိုးပေးပြီး စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အပြင်းအထန်ကြိုးစားသွားမှာလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်အခြေအနေမှာ ပေါ့ဘာအေးဂျင့်ရွိင်းအိုလာက ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ပီအက်စ်ဂျီဥက္ကဌနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ ယူနိက်တက်ဘက်က ပေါ့ဘာကို ပရီးမီးယားလိဂ် စံချိန်တင်လစာ …
June 21, 2021 By admin Sports News
ဗားရိန်းဈေးကိုင်နေလို့ ပေါင်၅၆သန်းတန်နောက်ခံမွန်းစတားကို ခေါတော့မယ့် မန်ယူ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရာသီလုံး ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့နောက်တန်းကို ပြုပြင်ဖာထေးဖို့ နောက်ခံမွန်းစတားတစ်ယောက်ကို မဖြစ်မနေခေါ်ဖို့လိုအပ်နေတာပါ၊ ယူနိက်တက်အသင်းဟာ အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားနဲ့တွဲဖက်ကစားနိုင်မယ့် နောက်ခံလူကို ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီး ရီးလ်ရဲမက်ဒရစ်အသင်းက ဗားရန်းကို အဓိက ဦးစားပေးပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ …
ယူနိက်တက်ကြောင့် ဆန်ချိုမကစားရတာဆိုပြီး ဖောင်းထုနေတဲ့ကိစ္စ ဆောက်ဂိတ်ရှင်းပြီ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ ဘိုးတော်မင်းလေးဘက်ကုန်းလောက်ကတည်းက မျှော်မှန်းထားတဲ့ ကာလအင်မတန်ရှည်ပစ်မှတ် ဆန်ချိုဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းမှာ တစ်ပွဲမှမကစားရသေးတာနဲ့ပက်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေအမျိုးမျိုးထွက်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားက၁၉သင်းဖန်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတဖောင်းထုရေးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှဖန်အများစုဟာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းကြောင့် ဆန်ချိုပါ အင်္ဂလန်အသင်းမှာမကစားရတော့တာဖြစ်တယ်လို့ ထရိုးနေကြတာဖြစ်ပြီး …
ဥရောပစူပါလိဂ်ကိုစလုပ်တဲ့ အစစ်အမှန်တရားခံက မန်ယူနဲ့လီဗာပူးဆိုပြီး စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ ဘာစီ ဘောလုံးကမ္ဘာအတွက် ဟိုးလေးတစ်ကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥရောပစူပါလိဂ်ပြသာနာဟာ ခုထိမပြီးဆုံးသေးပဲ တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ April လ 18 ရက်နေ့မှာဘောလုံးကမ္ဘာအတွက်သတင်းဆိုးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်က အင်္ဂလန်ထိပ်သီးကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ မန်ယူ,မန်စီးတီး,လီဗာပူး,အာဆင်နယ်,စပါးအီတလီ စီးရီးအေက ဂျူ ဗင်တပ်,အင်တာမီလန်,အေစီမီလန်စပိန်လာလီဂါ က …
ဖာနန်ဒက်ရဲ့ အသင်းဖော်တွေပေါ် ဆက်ဆံပြုမူပုံကို ဒဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ လီဗာပူးဂန္တဝင်ဟောင်း
ဖာနန်ဒက်ရဲ့ အသင်းဖော်တွေပေါ် ဆက်ဆံပြုမူပုံကို ဒဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ လီဗာပူးဂန္တဝင်ဟောင်း ဘရူနိုဖာနန်ဒက်က ထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် အသင်းဖော်တွေနဲ့ဆက်ဆံပုံကိုသဘောမကျလို့ လီဗာပူးဂန္တဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဂရေမီဆောင်းနက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းမှာရော လက်ရှိကစားနေတဲ့ နိုင်ငံအသင်းဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းမှာလည်း ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားဆိုတာကို ဂရေမီဆောင်းနက်က ဝန်ခံပေမယ့် …
June 20, 2021 By admin Sports News
ယူနိက်တက်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုလည်း ဒေါ့မွန်မကျေနပ်၊ ကတ်သပ်နေဟု ထင်နေ ယူနိုက်တက်ဟာ ဒေါ့မွန်တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး ဂျာဒန်ဆန်ချိုကို ပြောင်းရွေ့ကြေးတိုးမြင့်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ယူနိက်တက်အသင်းဟာ ကစားသမားနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီမှုရထားတာကလွဲရင်သေချာမှုဘာမှတော့မရှိသေးပါဘူး ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပေါင် ၆၇ သန်း + …
ဆန်ချိုနဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့ မန်ယူကို ကျန်ရစ်ဖြစ်အောင် ထပ်လုပ်ဦးမယ့် မန်စီးတီး
ဆန်ချိုနဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့ မန်ယူကို ကျန်ရစ်ဖြစ်အောင် ထပ်လုပ်ဦးမယ့် မန်စီးတီး မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဟာ ဒေါ့မွန်အသင်းက တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမား ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ လက်ရှိအထိ ညှိနှိုင်းနေတုန်းဖြစ်နေပြီး ဒုတိယအကြိမ်တော့ကမ်းလှမ်းမှုစတင်လိုက်ပါပြီ. တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီနှစ်နွေမှာ အနာဂါတ်မသေချာတော့တဲ့ ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်ပေါ့ဘာပြဿနာကရှိနေပါသေးတယ်။ ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်ပေါ့ဘာအေးဂျင့် ရွိင်းအိုလာက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က …
ရွိင်းအိုလာနဲ့PSGဥက္ကဌဆွေးနွေးပေါ့ဘာ အိုးထရက်ဖို့ကို တစ်ကယ်လမ်းခွဲတော့မည်.
ရွိင်းအိုလာနဲ့PSGဥက္ကဌဆွေးနွေးပေါ့ဘာ အိုးထရက်ဖို့ကို တစ်ကယ်လမ်းခွဲတော့မည်. တစ်ရာသီလုံးအသင်းကထွက်မယ်တကဲကဲလုပ်နေတဲ့ ပေါ့ဘာကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က ပေါ့လာအေးဂျင့်ရွင်းအိုလာဟာပီအက်စ်ဂျီအသင်း ဥက္ကဌနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပေါ့ဘာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတည်းက ရီးလ်ရဲ ဘာစီလိုနာစတဲ့အသင်းတွေနဲ့ သတင်းတွေထွက်နေပြီး အပြောင်းအရွေ့အတွက် အမြဲနာမည်ထွက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ဘာဟာယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ပေမယ့် လက်ရှိနိုင်ငံအသင်းမှာပြနိုင်တာလောက်တော့ကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ကောင်းတစ်လှည့်ဆိုးတစ်လှည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ …
June 19, 2021 By admin Sports News
ကမ္ဘာကျော်နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဝင်ဘလေကွင်း VIP ကားရပ်နားဝင်းကနေ လှည့်ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့ နည်းပြကြီးဖာဂူဆန်
ကမ္ဘာကျော်နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဝင်ဘလေကွင်း VIP ကားရပ်နားဝင်းကနေ လှည့်ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့ နည်းပြကြီးဖာဂူဆန် မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်နည်းပြဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ နည်းပြကြီးဖာဂူဆန်ဟာ မနေ့ညက ကန်တဲ့ စကော့တလန် အင်္ဂလန်ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ချိန် ကားရပ်နားခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ မနေ့ညက အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ စတော့တလန်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ ယူရိုပွဲမှာ စတော့တလန်သားကြီး …